Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU/Canada oo wacdaro ka muujiyay –Multicultural day – lagu qabtay magaalada Kichener/Ontario
Ururka OYSU/Canada oo wacdaro ka muujiyay –Multicultural day – lagu qabtay magaalada Kichener/Ontario
Tariikhdu marka ahayd 26-27 june ayaa lagu qabtay magalada Kichener/Ontario Canada maalin dhaqan-faneed ah (Multicultural day) oo la xuso dhaqamada kala gadisan ee qowmiyadaha ku nool wadankan Canada. Munaasabadan ayaa ahayd midii 40-aad ee laqabto waxaana si balaadhan ooga qeyb galay uruurka OYSU laantiisa Canada oo soo bandhigay sawiro iyo filimo ka waramaya xadgudubyada iyo xasuuqa ba’aan ay Gumeysiga Ethiopia ku hayso Shacabka aan waxba galabsanin ee Somalida Ogadenia.
Uruurka dhalinyarada ee OYSU/Canada ayaa waxey maalintaa ka saxiixeen warqad cabasha ah (petition) boqolaal shacabweynihii kasoo qeygalay munaasabada. Petiition-kan oo ku saabsanaa in laga joojiyo Ethiopia lacagta deeqda ah ee lasiiyo ayaa waxey dhalinyarada balanqaadeen in ay sii wadi doonaa saxiixa petition-ka ilaa inta dowlada Canada ay ka joojineyso mucaawanada ay siiso gumeysiga Ethiopia oo u adeegsata lacagaha deeqda ah ee aduunka uu siiyo in ay ku gumaadaan shacabka Ogadenya ee waxba aan galabsan.
Goobta waxaa kaloo ay ku soo bandhigeen dhalinyarada sawiro naxdin leh oo muujinaayo dhibaatada heysato shacab weynaha Somalida Ogadenya ay badeen gumeysiga Ethiopia iyadoo si joogta ah uu gumeysiga ugu hayo shacabka kufsi, dil, dhac hantida shacabka, barakicin, xadhig joogta ah iyo cunaqabatayn xaga nolosha ah.
Waxaa dhamaan shacabka ka soo qayb galay munaasabada ay la yaabayn sidaa fiican ee OYSU u soo bandhigtay qadiyada iyo Xadgubudka bani,aadanimo ee ka socda Ogadenia. Kulankan Waxaa ka soo qayb galay ururada siyaasada, kuwa xaquuqul insaanka iyo saxaafada qeybaheeda kala gadisan oo war-bixino ka qaatay uruurka OYSU uu Af-hayeen u ahaa wiil dhalinyara ah oo qadiyada ogaadenya aad u taageero lana yiraahdo Yasir Abdullahi oo ah xubin ka tirsan OYSU faraca Canada.
Ugu danbeyntii waxaa lagu soo gabo gabeeyay ciyaartii hidaha iyo dhaqanka S.Ogaadenya oo ah dhaanto aad cajiib u noqotay isla markaasna soo jiidatay dareenkii kasoo qeyb galashaashii munaasabada, waxaana aad ula dhacay guud ahaan qowmiyadihii soo xaadiray multicultural day.
Guul, Allaahu Akbar. OGADENYA way xoroobi Insha Allaah, iyada oo is jecel. Guumaysiga iyo guna qaatihiisuna way dhacayaan Insha Allah, iyaga oo dullaysan.
axmad xassan says:
guuletsta ilaah ha idinlajiro